Yini ongayilindela ePhilippines? Kulimi lwesiFilipino - 1aviagemPlay
Okuthunyelwe kwangaphambilini: Okudingayo ukwazi ngemijovo
Iposi elilandelayo: Ungazisongela kanjani izingubo ngaphandle kwensimbi
Kuthunyelwe 12 Februwari 2019 por Rômulo Lucena
Thina ebhasini eya eRussia
Namuhla sizokwazi okwengeziwe ngaleli zwe - iziqhingi ezibizwa ngePhilippines. Siqale le ngxoxo ukuze sifunde okwengeziwe ngaleli zwe, okuyiziqhingi ezinhle zase-Asia. Futhi akekho ongcono ukusitshela okuncane ngaye ngaphandle komuntu wasePhilippines. Kungakho ngikhuluma namhlanje nomngani wami wasePhilippines - uJeff.
Ngahlangana noJeff ohambweni lwami lokuqala ngiya eRussia, olwedlulela ePoland. Sasiyiqembu labantu abathatha lolu hambo bagcina sebengabangane. UJeff ungumuntu onelukuluku lokwazi!
UJeff ufuna ukwazi
Futhi unobungane kakhulu futhi unamakhono ekhamera omuhle. Ungazihlola wena kubhulogi yakhe futhi ubone ukuthi angiqedile: ukufinyelela nje: http://jeffoutsidethebox.com/
Futhi yebo, uyi-blogger yesikhathi samahhala (njengoba nje ngizama ukukwenza manje). Ngakho-ke lona “ngumhlangano wokuqala we-blogger” (kusuka kubhulogi lohambo lokuqala - 1aviagem.com). Kodwa ungumhambi ohamba phambili, ngisengumngane.
UJeff, kuze kube manje, yiPhilippines kuphela engiyazi! Ok, ngihlela ukushintsha lokhu ukwazi iPhilippines, ukwengeza ubungane abaningi basePhilippines (LOL). Futhi ngithemba ukuthi banobungane futhi banesineke njengoba kunjalo.
Kodwa ngenxa yalokho ngidinga ulwazi oluyisisekelo mayelana nePhilippines ngakho ngabuza uJeff ukuba enze le ngxoxo.
Ngakho-ke, ake sikhulume ngePhilippines namuhla.
Njengoba kungokweziko kule bhulogi amazwi azobe enemibala ukwenza kube lula kumfundi ukukhomba ukuthi ukhuluma bani. Ngizosebenzisa izinhlamvu ezihlaza okwesibhakabhaka ngenkulumo yami futhi uJeff uzoba nezinhlamvu ezibomvu.
Lokho kusho, ake siqale!
1 - Jeff, wazalelwaphi? Futhi uhlala kuphi namuhla?
Ngazalelwa enyakatho yePhilippines, futhi manje ngihlala eSan Francisco (USA).
2 - Uyini umsebenzi wakho?
Ngingumsayense wesayensi yezokwelapha
3 - kungani wathuthela phesheya?
Ngokwethembeka, ngifunde imisebenzi engcono nemibandela yezezimali.
4 - yini oyithanda kakhulu ngePhilippines?
Ukungenisa izihambi kwethu. Sinesiqubulo sezokuvakasha esizenzele: “Kumnandi kakhulu ePhilippines” ngenxa yabantu basePhilippines. Thina basePhilippines sinobungane futhi sinomoya wokungenisa izihambi. Awuvumi ?!
Yebo, vumelana ngokuphelele! hahaha LOL
5 - yini obungayishintsha lapho, uma ukwazi?
Ngithanda iPhilippines, kodwa kunezinto eziningana engizithandi. Into yokuqala yilelo kholi "Isikhathi sasePhilippines" - okusho ukuthi ukufika kwemizuzu noma amahora sekwedlule isikhathi kuqhathaniswa nesikhathi esihleliwe. Okwesibili ukuphoqelelwa okubuthakathaka komthetho. Okunye ukuhlela kwedolobha okunyantisayo. Okunye ukungabi nesiyalo, inkohlakalo, ukuntuleka kohlelo lwezobulungiswa, njalonjalo. Uma bengingashintsha okuningi kwalokhu ... ngicabanga nje ukuthi singahamba ibanga elingakanani.
I-6- Ngiyazi ukuthi unenkumbulo enhle yezingoma, ingabe imasiko, noma iyisici nje sikaJeff? (Ngisho lokhu ngoba phakathi nohambo wavusa eKhayina).
Ngicabanga ukuthi kuyamasiko. Iningi labantu basePhilippines bathanda ukucula (ngisho noma uphumelele!) Kuyinto yokuphefumula ukusho ukuthi siyayithanda i-karaoke. Cishe yonke imizi ePhilippines inomshini we-karaoke noma imakrofoni yokucula. Umkhosi wonke ovela ehhovisi ehhovisi, izinsuku zokuzalwa, emishadweni ine karaoke. Lona ukuchitha isikhathi kwethu kuzwelonke. Akunandaba ukuthi ulungile noma cha, vele uhlabelele! Yilokho.
7 - Futhi kuliqiniso yini ukuthi iPhilippines ineziqhingi ezingaphezu kwezi-7.000? Yiluphi ulimi olusemthethweni?
Ziyiziqhingi ze-7.641 ukuba ziqonde ngqo! Ngicabanga ukuthi inombolo yamanje izohlala isikhathi esingakanani ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu nokushisa komhlaba. Ngakho yebo, ungaba neziqhingi ezingaphezu kwe-20 ngosuku ukuhlola ePhilippines!
IsiFilipino ulimi lwethu olusemthethweni, kodwa iningi lamaPhilippines likhuluma isiNgisi.
8 - yini ongayincoma ukuthi izivakashi ziyenze noma zivakashele ePhilippines ohambweni lokuqala?
Ngithi njalo ukuya eBoracay. Liyisiqhingi esihle nesibhakabhaka esimhlophe, esitholakala ngamakhilomitha angu-170 eningizimu enhloko-dolobha, iManla. Yisanda kuvaliwe ngenxa yendawo eyingozi eyabangelwa ukuvakasha okungenacala. Manje emva kwezinyanga eziyisithupha zokuvuselela, kuvuliwe. Futhi angikwazi ukulinda ukuvakashela leli paradesi futhi. Awudingi ngisho nokuhlela uhambo, ngoba kukhona okuningi okuqhubekayo lapho. Okunye ongakhetha kuzoba iPalawan noma iCebu. Izivakashi eziningi zifika ePhilippines ngenxa yamabhishi angathathwa.
UJeff eBoracay wase (http://jeffoutsidethebox.com/)
9 - kuthiwani ngebhulogi yakho, uhlela ukuqhubeka?
Ngingathanda, kodwa angikhipheki kakhulu ukubhala. Mhlawumbe uthumele futhi ubhale kuma-social media njengo-Instagram, okulula ukukwenza.
I-10- Mangaki amazwe owavakashele?
Ngilahlekelwe ukubala ... kepha nginesiqiniseko sokuthi bebengaphezu kwama-50.
Mhlawumbe, ngifisa sengathi ngingafinyelela kule nombolo futhi. LOL. Ngizokwenza hahaha engcono kakhulu. (I.
11- Jeff, futhi kungani uhamba kakhulu?
Ngangihlale ngifuna ukuhamba. Ngombono wami, awukwazi ukubeka intengo ezinkumbulo ozithola uma uhamba. Abanye abantu bakhetha ukuphila ngempahla, kepha ngikhethe ukuphila okuhlangenwe nakho. Asikwazi ukubikezela ukuthi kuzokwenzekani esikhathini esizayo futhi uma ngingaphila ukubona ama-forties ami, ama-50 noma ama-60, ngeke ngizisole. Ngakho ngixhumekile emhlabeni futhi ngigcwaliswe yilo.
O, leyo yindlela enhle yokucabanga!
UJeff, ngithemba ukuthi ugcina leli thuba elihle lihamba emhlabeni jikelele. Ngikholwa sonke lapho sisebenzelana nomunye umuntu, uma singakhuthaza, noma sisize lo muntu, khona-ke lena yindlela enhle yokushintsha umhlaba.
Futhi izwe lidinga abantu abengeziwe abaphila okuhlangenwe nakho futhi abaphili ukuze babe nezinto ezibonakalayo, impahla.
Futhi lapha sizoqeda le ngxoxo. Siyabonga uJeff, izwe lidinga i-Jeffs ngaphezulu.
Siyabonga ngokuxoxisana, kwakumnandi ngempela.
Ukuze uthole izingxoxo eziningi, amathiphu nomlando onjengale, sicela uchofoze kumephu yethu engezansi ngezansi.
Futhi njengendondo yokugcina yomkhumbi wesikhathi sokuqala ePhilippines oyobe eshukuthela ngishiya isixhumanisi se-bookaway esilula futhi kulula ukuhlela uhambo oluku-intanethi.
Uma uthanda, cindezela inkinobho ngezansi. Noma shiya amazwana wakho, wabelane, futhi usisize sidlale umhlaba. (I.